Faah faahin:- Dagaal culus oo ka dhacay gobolka Sh/dhexe iyo qasaare lixaad leh oo ka dhashay – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Faah faahin:- Dagaal culus oo ka dhacay gobolka Sh/dhexe iyo qasaare lixaad leh oo ka dhashay
Waxaa faah faahin dheeraad ah laga helayaa dagaal culus oo saqdii dhexe xalay ka dhacay deegaanka Qalimow oo ku yaala inta u dhaxeeysa degmooyinka Balcad iyo Jowhar ee gobolka Sh/dhexe.
Dagaalkaasi ayaa la sheegayaa inuu yimid kadib markii dagaalyahano ka tirsan Al-shabaab ay weerar culus ku qaadeen xarumo ay deegaanka Qalimow ku lahaayeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya.
Weerarkaan oo dhacay xilli saqdhexe ee xalay ayaa la sheegayaa inuu ahaa mid aad u culus oo ay dagaalyahanadda Al-shabaab soo qaadeen, waxaana weerarka kadib bilawday dagaal toos ah oo ay labada dhinac isku adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan.
Dadka deegaanka ayaa warbaahinta Bulshoweyn u sheegay inay halmar kusoo tooseen rasaas iyo hub culus oo ka dhaceeysa deegaanka Qalimow, waxaana la xaqiijiyay in dagaalkaasi uu geystay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray labada dhinac iyo dad shacab ah.
Dagaalkaasi ayaa la sheegayaa inay ku geeriyootay seddax qof uu mid ka mid ah ka tirsanaa dagaalyahanada Al-shabaab, halka labada kalena ay ka tirsanaayeen ciidamada dowladda Soomaaliya.
Sidoo kale, 5 qof kale oo shacab ah ayaa la sheegayaa inay ku dhaawacantay rasaasta ay labada dhinac is-weydaarsanayeen, waxaana dhaawacooda la geeyay xarumaha caafimaad ee ku yaala magaalada Jowhar.
Dhinaca kale, dagaalyahanada Al-shabaab ayaa la sheegayaa inay ka baxeeen deegaanka ay weerarka kusoo qaadeen ee Qalimow, waxaana deegaankaasi saakay lagu arkayaa ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya, oo howlgalo baaritaano ah ka wada halkaas.
Si kastaba ha ahaatee, ma jiro wax hadal ah oo weli kasoo kala baxay saraakiisha ciidanka dowladda Soomaaliya iyo kuwa Al-shabaab, kaas oo ay kaga hadlayaan dagaalkaan xalay ka dhacay deegaanka Qalimow.